Dị]: Cupdị iko ụdị mpịachi [Usọrọ]: Yiri ya na oke ịba ọcha na ikuku, ngafe ụgbọala, kichin, wdg. [Ọrụ]: Họchaa ngwa ngwa ikuku niile. [Anyị nwere asambodo]: FDA / CE / ikike nke akụkụ nke NIOSH [Oge]: Mmetọ ikuku-40hours, mmetọ na-erughị ala-30hours, mmetọ dị ukwuu-20hours, mmetọ siri ike-8hours. [ndetu]: 1. Ọ bụrụ na ihe nkpuchi ahụ mebiri emebi, keguru mmiri ma ọ bụ na ọ naghị eku ume nwayọ, biko dochie nkpuchi ahụ ozugbo. 2. Emegharịla, hichaa ma ọ bụ gbanwere masị masị…
N95 echebe mask nke FDA CE
Dị]: Cupdị iko ụdị mpịachi [Usọrọ]: Yiri ya na mmiri ịwụ ahụ na kpochapụ exhagbọ ala, kichin, wdg. [Ọrụ]: Họchaa ngwa ngwa ikuku niile. [Anyị nwere asambodo] ： FDA / CE / ikike nke akụkụ nke NIOSH [Oge]: Mmetọ ikuku-40hours, mmetọ na-erughị ala-30hours, mmetọ dị egwu-20hours, mmetọ siri ike-8hours. [ndetu]: 1. Ọ bụrụ na ihe nkpuchi ahụ mebiri emebi, keguru mmiri ma ọ bụ na ọ naghị eku ume nwayọ, biko dochie nkpuchi ahụ ozugbo. 2. Emegharịla, saa ma ọ bụ gbanwere ma ọ bụ gbanwere…
Dị]: GM1-AM GM1-BM [Ihe eji eme ya): Yiri ya na mmiri ịwụ ahụ na ike ọkụ na-ere ọkụ, kichin, wdg. [Ọrụ]: Họchaa ngwa ngwa ikuku niile. Zute ọkọlọtọ GB / T 32610 -2016. [Anyị nwere asambodo]: FDA / CE [Oge]: Mmetọ ikuku-40hours, Mmetọ ikuku-30hours, mmetọ dị egwu-20hours, Nnukwu mmetọ-8hours. [ndetu]: 1. Ọ bụrụ na ihe nkpuchi ahụ mebiri emebi, keguru mmiri ma ọ bụ na ọ naghị eku ume nwayọ, biko dochie nkpuchi ahụ ozugbo. 2. Ejikwala, saa ma ọ bụ gbanwere ihe…
KN95 kpuchie ụdị ụmụaka